Munamato kuna Mutsvene Ignatius weLoyola. ? Kudzinga Vanhu Nevavengi
Munamato kuna Saint Ignatius weLoyola Izvo zvine simba kwazvo nekuti kubvira paari pasi pano chinhu chikuru kwaari chaive kugara nekutenda nekubatsira vamwe.
Ichi ndicho chikonzero nei akawana zvinhu zvikuru kunze kwekuve mutendi anoshinga weshoko raMwari uye nekuita dzidziso yechiKristu. Kwaive kutenda kwakasimba uko kwaigara kune izvo zvakamubatsira kusvika pakurarama kwake kwekupedzisira kuita kuda kwaIshe.
Zvino ava musvinu akarohwa neChechi yeKaturike nekuda kwemasimba makuru aakange achipa kunyangwe abva pasi pano.
Muranda weshoko raMwari wekugadzira iye nhasi anova mubatsiri wedu kutibatsira kubva mumamiriro ezvinhu akaipa.
Chero chatinoda isu chatiri kupfuura nacho, zvirokwazvo San Ignacio de Loyola ane rubatsiro mumawoko ake kuti atipe isu.
1 Munamato weSanta Ignatius weLoyola Ndiani?
1.1 Munamato weSanta Ignatius weLoyola kuchengetedza vanhu kure
1.2 Namata kuna Saint Ignatius weLoyola kurwisa vavengi
1.4 Kuti ndidzivise vavakidzani vakaipa
Munamato weSanta Ignatius weLoyola Ndiani?
Nhoroondo inotitaurira kuti Ignacio de Loyola akazvarwa muna 1491. Akaita basa remauto setsika yemhuri yake. Nekudaro, akatambura kukuvara kwakamutadzisa kuenderera mberi nedzidzo yake yechiuto uye nenzira iyi akatanga kuve mutendi akatendeka mukutenda kwechiKristu.
Kutanga kuita kumwe kutiza kwemweya uye akafunga kuwedzera mamwe maekisesaizi pakudzidziswa uye ndipo paakatanga kushoropodzwa nevamwe vakateedzera imwechete yekudzidzira modhi. Mushure mezviitiko zvakawanda zvaaifanira kupfuura nazvo, akatanga ne Kambani yaJesu chiri chinhu chinosimudza kumusoro nhasi inoshanda mune zvese nyika.
Akafira mukati Roma mugore ra1556 uye akarohwa mugore re1609 uye akazoturikidzwa muna 1922. Akapihwa muna Chikunguru 31 kupemberera kuberekwa kwake uye anoyeukwa pasi rese.
Munamato weSanta Ignatius weLoyola kuchengetedza vanhu kure
Oo! Akaropafadzwa Mhandara, akakwiridzirwa uye amai vekudenga, vakafemera pamwe nemwenje wako wemadzimai Musande Ignatius weLoyola, kutevedza nzira yebasa rehupirisita, kutsaurira hupenyu hwake pamweya hwake kuti ashumire, sebasa uye muenzaniso, kuvanhu , Ndinokukumbira iwe, nekuzvininipisa, regerera kukanganisa kwangu uye undibvumire, nekuzvipira kukuru kwandinotaura kwauri, kuti Mutsvene Ignatius weLoyola andichengetedze, simba yekutenda, kubvisa vanhu kubva munharaunda yangu vanongoda kundiunzira zvakaipa, ndinokumbira kuti muvachengetedze kubva kudivi rangu uye muvaudze kuti zviri nani kuti vaite zvakanaka. Ameni.
Kana iwe uchida kutamisa vanhu kuenda, uyu ndiwo munamato wakaringana weSanta Ignatius weLoyola.
Apfuura San Ignacio de Loyola kuburikidza nekutambudzwa kakawanda nekuda kwekutenda kwake, akapukunyuka.
Yakasimba, kurwa uye, kusvikira nhasi, muenzaniso woutsvene kunyangwe paine akawanda mamiriro. Anogona kutibatsira kumira takasimba mumamiriro ezvinhu akaoma.
Kunga kudzinga vanhu vanogumbura, masimba akashata, mamiriro akashata kana chero chinhu chiri kuba rugare rwedu.
Iwe unongofanira kutenda kuti iye ane simba rekusimudzira isu pamberi pababa vekudenga nekudaro mamiriro kana munhu anotama kubva kuhupenyu hwedu zvizere.
Namata kuna Saint Ignatius weLoyola kurwisa vavengi
Vazhinji Vatsvene Baba Musande Ignatius weLoyola, muvambi weSosaiti yaJesu; akasarudzwa pakati pezviuru kuti aparadzire kubwinya kwaMwari kumativi mana enyika; murume akakwirira kwazvo mumhando dzose dzekunaka ...
Asi kunyanya mukuchena kwechinangwa chawakagara uchishuva kubwinya kwaMwari kukuru. anokudzwa gamba rekutendeuka, kuzvininipisa uye kungwara; chisinganete, chinogara chiripo, chakazvipira zvakanyanya, chinodadisa; yerudo rwepamusoro-soro kuna Mwari, rwekutenda kune hupenyu uye tariro yakasimba ...
Ndinofara, Baba vangu vandinoda, kukuonai muchifumiswa nezvakawanda uye zvakatungamira zvekutungamira, uye ndinokumbira kuti muwane vana venyu vese iwo mweya uyo wakakurudzira, uye kwandiri nechinangwa chakadai, kuti kunyangwe pazvinhu zvidiki kwazvo ini nditsvagei kurumbidzwa kwaMwari. mukutevedzera neyako, uye nenzira iyi ndakakwanisa kuva wekambani mukubwinya.
Namata munamato weSanta Ignatius weLoyola kurwisa vavengi nekutenda kwakawanda.
Vavengi vaivapo kubva pakutanga kwezvisikwa uye San Ignacio de Loyola aive navo uye akabuda achikunda mumamiriro ese ezvinhu aakapfuura, hapana chimwe chazvo chiri nyore.
Ichi chikonzero ndinomubvunza kunyanya muchirevo kurwisa vavengi Saint Ignatius weLoyola anogona kutibatsira kugadzirisa mamiriro akawanda ayo munyama anogona kuoma kukunda.
Minamato Yakagadzirwa nekutenda ine simba uye kana zvinangwa zvanaka, uye munamato unobuda sekuchema kubva kumweya unoshaiwa, hapana chingaunzwa kwatiri.
Anokudzwa Saint Ignatius weLoyola, muvambi weSosaiti yaJesu uye nyanzvi yemutemo uye mudziviriri wangu!
Sezvo iwe uri wakakwirira Kudenga nekuda kwekuita kwako mabasa kukudzwa kukuru nekubwinya kwaMwari, uchirwa nevavengi veChechi, kudzivirira kwedu kutenda kutsvene, kuchikurisa kuburikidza nevana vako pasi rese ...
Ndisvike pauMwari hwehumwari, nekuda kwehunhu husinga peri hwaJesu Kristu, uye nekureverera kwaamai vake vane mbiri, kuregererwa kwakazara kwezvitadzo zvangu, rubatsiro runoshanda kuti vade Mwari uye vamushumire nekuedza kwese kubva ikozvino, kutsiga nekusimba munzira yekunaka. uye mufaro wekufa muushamwari hwake uye inyasha, kumuona, kumuda, kumufarira uye kumukudza mune yako kambani kwemazana emakore.
Wakafarira munamato weSan Ignacio de Loyola wekudzivirira?
Aiziva nzira yekuchengetedza nekudzivirira kutenda uye nezvaaitenda kunyangwe panguva dzakaipisisa uye izvi zvinomuita mudziviriri wekereke yechiKristu.
Kwaari tinogona kusimudza minamato yedu kwaari bvunza kuchengetedzwa munguva yakaoma angave edu kana emhuri yeduwo zvavo.
Ese aya mamiriro ezvinhu anotishungurudza anofanirwa kusiiwa pamberi pehuvepo hwake kuti atibatsire.
Kuti ndidzivise vavakidzani vakaipa
Saint Ignatius weLoyola, mutendi akatendeka wekutenda kwechiKaturike, uyo akamudzivirira kubva kunhema dzakatsauka, dzevakatsauka pakutenda nehunyengeri, kuti pamusoro peCatholic yakavakwa, ndinokukumbira ubve kwandiri, sezvo iwe nevadzidzi vako vechiJesuit vakatendeuka vakasimudzira kuputsika kwavo pamusoro pechechi, ndinokukumbira, bvisa vanhu kubva kunogara kwakaipa kubva kwandiri, dzinga vakaipa vavakidzani, bvisa vavengi vangu panzira yangu, Saint Ignatius weLoyola, mutsvene akazvipira waJesu Kristu, kune kunaka kwako uye Nyasha ndinoisa. Ameni
Kana iwe uchida kudzinga vavakidzani vakaipa, iwe unofanirwa kunamatira munamato kuna Saint Ignatius weLoyola.
Vavakidzani, kazhinji, vanova mhuri yedu sezvo mune akawanda mamiriro ivo ndivo vepedyo vatinazvo.
Ichi chinogona kuve chinhu chakanaka, nekuti kuve nemunhu wepedyo newe haambofi ariko, asi kana ivo vakaipa vavakidzani, zvinhu zvese zvinova zvakaoma. Ivo vanhu avo vanova vavengi vedu uye avo nguva dzese vari kuita kuti hupenyu hwedu husakwanisika.
Namata, izvo zvinofanirwa kuve chidziviriro chedu chega kunyangwe mumamiriro ezvinhu atisingazive chaizvo zvekuita.
Saint Ignatius waLoyola unogona kutibatsira kuti tidzivise vavakidzani vakaipa izvo zvakauya kuzoshandura runyararo rwehupenyu hwedu uye hweavo vese vakatipoteredza.
Simba rakaipa rinozadza nharaunda yese nemasimba akashata ayo isu tinofanirwa kubva tisati takonzera kukuvara kwakawanda mukuenderana kwese kwenzvimbo.
Tinofanira vabvunze kuti vatame vasina kukuvadza, vasina kusiya zvavakaita uye kubvisa simba rose rakaipa, munyengetero une simba uyo unotibatsira nguva dzese.
Unogona uye unofanira.
Iwe ungofanire kuve nekutenda mumoyo mako. Kutenda kuri kuzoita kuti vese vashande.
Isu tinofanirwa kugara tichitenda musimba reSt Ignatius remunamato waLoyola kuti tidzivise vanhu nevavengi.
Saka, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti uchagara uine rubatsiro rwamwari.